Amabhonasi ekhasino aseYurophu - Amakhodi weBhonasi Yekhasino aku-inthanethi
Amabhonasi ase-European Casino
Posted on September 19, 2019 September 19, 2019 Umbhali Andrew	Amazwana Off kumabhonasi e-European Casino
Ukuzimisela okuvuselelesi kwe-EUcasino okuhlaziywe njalo kwemidlalo ebandakanyekayo kanye nobubanzi obukhulu bokunxephezela ngentuthuko kubeka ngempela leli khasi le-inthanethi le-inthanethi yokugembula ehlukanisiwe nokuphumula. Ilawulwa yiSkillOnNet, umkhiqizo we-EUcasino utholakala ngezilimi ezahlukahlukene, ungasigcina futhi sidlale esinqumweni sakho sezindlela zezimali ze-9 nosizo lwezezilimi eziningi ngokufanayo kufinyeleleke, okwenza kube ukubhekana ne-Europe ngokweqiniso enkundleni yokugembula yewebhu.
Siyakwamukela Iphakheji ne-Wagering
Isishuqulu esisha sokwamukelwa kwe-EUcasino siphelele, sinikeza ukuhlanganiswa kwemivuzo kanye nezikhathi zamahhala kweminye imidlalo emangalisayo. Kukhona i-350 i-euro ebiza imivuzo kanye nezinguquko zamahhala ze150 noma yikuphi okumangalisa ngokwedlulele kungokoqobo ongadingi ukubheja noma yikuphi impumelelo ezenzweni zawo zamahhala. Kukholwe noma ungakukholwa! Ama-Spins abo amahhala afana nemali yangempela okusho ukuthi ungaphuma nemali uma unqoba kubo. Olunye ushintsho oluhle kakhulu ukuthi yonke imivuzo manje isivele ibhejelwe i-30x kusamba semali okuwukuthuthuka okukhulu ekunikezelweni okudala okudala. Ngeza kulolo suku olulinganayo lokuphuma kwemali kufaka phakathi iziphetho zeviki futhi lokhu kwenza i-EUcasino ibe ngomunye wethimba elinabadlali abasebenza kakhulu online.
AbakwaSkillOnNet bahlinzeka nge-EUcasino ngomkhiqizo wabo, owenza kahle kuwo womabili amafomu wokulanda nokungalandwa. Ukwehluka okungekho kulandiwe kuyinto elula futhi elula, esebenza ngaphakathi kwewindows yohlelo lwakho lwewebhu, futhi kuyaqondakala ukuthi ayifani nefomu lokulanda, ngakho-ke asikho isizathu esivumayo sokuxazulula. Amabhonasi ekhasino waseJalimane
Uzonqotshwa ukuzimisela okukhulu kwemidlalo efinyeleleka e-EUcasino. Ukuzivumelanisa okuhle kweBlackjack, iRoulette neBaccarat ngokufanayo kungajatshulelwa njengezinguqulo ze-Live Dealer, kufaka phakathi abathengisi besifazane abathandekayo abaphila nge-webcam. Kunezithebula eziningi nemidlalo yokugcina abadlali bebandakanyekile, ama-assortment ambalwa we-video poker afinyelela kuzandla ezingama-25 zokudlala ngaphandle kokubambezeleka komzuzwana, kanye nokukhetha okukhulu kokuvuleka okuzodlalwa kusuka kubahlinzeki bemidlalo abadume kakhulu emhlabeni isib. I-WMS, i-NETEnt ne-Microgaming. Lokhu kuza ngazo zonke izinhlobo nobukhulu kusuka kuma-payline ayi-1-50 kusihlokwana sezihloko, ngokwesibonelo, izikhala ezinetimu ezifaka zonke izinhlamvu zakho ozithandayo njengeDracula. UJack esihlokweni sikabhontshisi namagama amakhulu emikhiqizo afana ne-Monopoly, Guns and Roses kanye neRainbow Riches akhethe u-Mix nokunye. Eminye imidlalo yekhompyutha inama-bonanzas ahlukahlukene ahlukile! Okunye ukuvuleka okuvame kakhulu kufaka imidlalo ye-3D ekhethekile ye-EUcasino enemiklamo eveza iso nemisindo enengqondo, ukuvuselelwa kwemidlalo yabo epholile, ngokwesibonelo, iBejeweled, i-Space Arcade neCubis, ushintsho lomdlalo wokunethezeka, ngokwesibonelo, iCall of Duty neStreet Fighter, ngisho nokusha ivula umdlalo wokuvula, ngokwesibonelo, kumdlalo we-hit Flip Flap ngamalungiselelo awo ahlukene wama-reels! Imidlalo emisha ifakiwe isonto ngalinye noma kwenye indawo endaweni, kugcina izinto zimnandi futhi zintsha kubadlali.
I-EUcasino ithuthukisa ukunikela kwayo ngokwengeziwe ngomqondo obabazekayo wokuthuthuka okujwayelekile, okukhonjiswa endaweni yabo yansuku zonke, futhi nganoma yisiphi isilinganiso amalungiselelo we-2 asebenza usuku nosuku, imiklomelo ingaqongelela ngempela. Khokha ingqondo ngokukhethekile kumalungiselelo wokubuyisa imali, izikhala kanye nemincintiswano engavuleki, iBlackjack neRoulette yomzuzu wokuwina izipesheli, ukukhushulwa kwe-Auto Cash, imivuzo yesitolo, imali yamahhala yokuzama imidlalo emisha, nokugcwala okuningi.
I-EUcasino inikeza inani elikhulu lamasu wokufakelwa, inani elikhulu lawo elicacisiwe ezizweni ezithile, okwandisa umdlandla wazo kubadlali abavela kuzo zonke izizwe. Amasu wokufaka afaka amakhadi wesikweletu nawokukhokhisa, abakwaNeteller, Skrill (Moneybookers), i-ECOcard, iWebMoney, i-ClickandBuy, i-paysafecard, i-EUteller, iPoli, iSofort nabanye abaningi.
Ukusekela kuyatholakala ngomzuzu ngamunye wayo yonke indawo yendawo, kufaka usizo lwezilimi eziningi futhi kutholakala ngocingo, i-imeyili kanye nenkulumo ebukhoma.
Amakhodi we-casino e-inthanethi ayikho idiphozi edingekayo:
I-175 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-21Nova Casino
I-135 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Planet 7 Casino
I-60 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Buzz Casino
I-155 ayikho ibhonasi yediphozithi ku-TlcBet Casino
I-130 mahhala ayikho ibhonasi ye-casino ye-deposit ku-Fruity King Casino
I-85 yamahhala e-WinTingo Casino
I-95 yamahhala ihlola ibhonasi yekhasino ku-Jackpot Paradise Casino
I-145 yamahhala e-Dragonara Casino
I-155 yamahhala e-spin casino e-Dafa888 Casino
I-145 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi kuCeltic Casino
Izindaba ezinhle! I-Diamond Emnyama, i-Spartan Slots nebhokisi le-24 linikezwe ukuphakama ubuso!
I-170 ayikho ibhonasi ye-casino yediphozithi ku-Polder Casino
I-40 ayikho ibhonasi yediphozi e-Palace of Chance Casino
I-50 ayikho ibhonasi yediphozi kuCocoa Casino
I-15 yamahhala e-Villento Casino
I-135 yamahhala e-Sun Palace Casino
I-145 yamahhala i-spin bonus ku-Dukes Casino
I-20 yamahhala e-Butlers Bingo Casino
I-95 yamahhala e-JenningsBet Casino
I-165 ayikho ibhonasi ye-casino yedayimenti e-Las Vegas Casino
I-50 ayikho ibhonasi ye-deposit ku-Mission2Game Casino
I-135 yamahhala e-William Hill Casino
I-40 yamahhala i-casino ku-Players Palace Casino
I-175 yamahhala i-spin casino e-Glorious Casino
I-30 yamahhala e-LuckLand Casino